X-Avto drift Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » X-Avto ပျံ့
X-Avto ပျံ့ APK ကို
မြန်နှုန်းကိုပိုမိုထောင့်ကပို! အဘယ်အရာကိုမျှထိုအကြွင်းမဲ့အာဏာပျံ့အတွေ့အကြုံကနေသင်တို့ကိုအာရုံပါလိမ့်မယ်။ အစွန်းရောက်မောင်းနှင်မှုကျောင်းမှာကအတည်ပြုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်ပင် klutchkick အပါအဝင်ရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု, နှင့်နောက်ဘီး drive ကိုကားတစ်စီး၏လက်တွေ့အပြုအမူပေါင်းစပ်။ အားကစားမိကျောင်းမှဂန္ထံမှအသစ်သောအဆင့်ဆင့်နှင့်ကားများဖွင့်လှစ်အပြီးအစီး driftkhana နှင့် gymkhana တာဝန်များကို။ တဖန်သင်တို့ပင်ငှက်ပျောအပေါ်စီးနိုငျပါသညျ! သို့မဟုတ်ပဲအစစ်အမှန်ကမ္ဘာအပါအဝင်အပုဒ်တွေထဲကပေါ်တွင်ဘေးတိုက်ရွှေ့။ ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်လူမျိုး ပို. ပင်ပျော်စရာစေမှသာအဆင့်နှင့်သာယာသောအီလက်ထရောနစ်ဂီတ၏နယ်နိမိတ်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားကြသည်!
ဂိမ်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်အဆင့်ပေါ်မှာရှိသမျှအလုပ်တွေကိုဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ရုံစျေးကွက်သို့မဟုတ်အတွင်းစက်ဝိုင်းစစ်မှန်တဲ့လွင့်မျောနေသောလိုအပ်ပါတယ်တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ရန်။ ထိန်းချုပ်ရေးအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာပျံ့ထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုကားနှိပ်တဲ့အခါမှာသငျသညျအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုကားကပိုဖြောင့်သွားသည်ကိုလွှတ်သောအခါအဆုံးလှည့်ဖို့လိုသည်။ ရုံနည်းနည်းအလေ့အကျင့်များနှင့်သင်ကမကြိုက်ဘူးမည်!
တရားဝင် website တွင်သတင်းကိုလိုက်နာပါ!
1.61-635 bugfixes နှင့်တိုးတက်မှုများ
3rd လူတစ်ကင်မရာ -added!
ရမှတ်များ mode ကိုအတူ 10 အဆင့်ဆင့် -Now
47.38 ကို MB
SBK16 တရားဝင် ...